स्ट्याण्डर्ड, नेपाल एसबीआई, हिमालयन, लक्ष्मी र एनबीबाहेक अरु बैंक कर्जा बढाउन सफल| Corporate Nepal
स्ट्याण्डर्ड, नेपाल एसबीआई, हिमालयन, लक्ष्मी र एनबीबाहेक अरु बैंक कर्जा बढाउन सफल
कात्तिक ८, २०७७ शनिबार ०७:३५
काठमाडौं । कोरोना महामारी बीच उद्योग व्यवसाय अस्तव्यस्त रहन्दा प्रभावित बनेको बैंकहरुको कर्जा प्रवाहमा यतिवेला क्रमशः सुधार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ऋणी आकर्षण गर्न कर्जा प्रवाहमा विभिन्न स्किम ल्याएको एनआईसी एशिया बैंकले सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
तर यसअवधिमा २७ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये ५ओटा बैंक (स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई, हिमालयन, लक्ष्मी र नेपाल बंगलादेश बैंक)ले भने कर्जा बढाउन सकेनन् । बैंकर्स संघको तथ्यांक अनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा २७ ओटा वाणिज्य बैंकबाट थप रू. १ खर्ब २९ अर्ब २५ करोड कर्जा प्रवाह भई कुल रू। ३० खर्ब ३४ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ ।
उक्त अवधिमा सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने अग्र स्थानमा रहेको एनआईसी एसियाले थप रू. २९ अर्ब ८६ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । यसरी उसको असोजसम्म कुल कर्जा प्रवाह रू. २ खर्ब ३ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । उक्त कम्पनीले शाखा कार्यालय तथा एक्सटेन्सन काउन्टरको संख्या बढेकोले मुलुकभर कर्जा प्रवाह हुँदा कर्जा लगानी बढेको बताएको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।
एनआईसी एशियाले ल्यायो ‘इन्स्ट्रा–बाई योजना’, यस्ता छन् सुविधा
बैंकहरुको नाफा घटेसँगै घट्यो लाभांश
एनएमबि बैंकमा अब भाइबर, फेसबुक र एनएमबि ई–एपबाट पनि खाता खोल्न सकिने
सानिमा बैंकले साधारण सभा सक्यो, साढे १३ प्रतिशत मुनाफा वितरण गर्ने निर्णय
अधिकांश बाणिज्य बैंकको नाफा घट्यो, वितरण योग्य नाफा झनै निरासाजनक
कात्तिक २६, २०७७ बुधबार
मेरोमाइक्रोफाइनान्स नवौँ वर्षमा, ‘छोटो समयमा छुट्टै ब्राण्ड': सीईओ
दुई सातापछि उपल्लो र अपर खिम्तीबाट १९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन